१७ मंसिर २०७४, आईतवार – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
Day: १७ मंसिर २०७४, आईतवार
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार पक्राउ
काठमाडौं, १७ मंसिर । निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याका मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै प्रहरीले समिरमानसिंह बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले बस्नेतलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको हो..
काठमाडौ टोखाकी कल्पनाको सर्लाहीको गेष्टहाउसमा हत्या
सर्लाही, १७ मंसिर । सर्लाहीको मलंगवामा एक लजमा एक महिलाको हत्या भएको छ । काठमाडौं टोखा–९ घर भएकी ३२ वर्षकी कल्पना श्रेष्ठ लजको कोठा नम्बर २०५ मा बस्नुभएको थियो । आइतबार बिहान अबेरसम्म पनि कोठा नखुलेपछि लज सञ्चालकले महिलाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।..
आहा रारा फुटबल प्रतियोगिता माघ ९ गतेदेखि हुने
पोखरा, १७ मंसिर । आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो माघ ९ देखि २० गतेसम्म पोखरा रंगशालामा हुने भएकोछ । सहारा क्लबद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोफसलको बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विदेशी ‘ए’..
नेपाल र केन्याबीचको अभ्यास खेल आज, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, १७ मंसिर । आइसिसि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलको तयारीका लागि नेपालले आज केन्यासँग अभ्यास खेल खेल्दैछ । प्रतियोगिताका लागि युएइमा रहेको नेपालले आज केन्यासँग खेल्न लागेको हो । पहिलो अभ्यास खेलमा केही नयाँ..
दुई सय सात मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, कुन कुन छन ?(सुची सहित)
राजविराज, १७ मंसिर । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ सप्तरीमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहका अनुसार कुल २९५ मतदानस्थलमध्ये २०७ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील र ८८..
पैसाका लागि बलिउड कलाकार जे पनि गर्छन- धर्मेन्द्र
काठमाडौं १७ मंसिर । मनमौजी पाराका बलिउडमा ‘हिम्यान’ भनेर चिनिने धर्मेन्द्रले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा बलिउडलाई खुलेर निशाना बनाएका छन् । उनले अहिले बलिउड इन्डस्ट्री ‘सब्जी मंडी’ बनेको बताएका छन् । उनले अहिले कलाकारले पैसाका लागि जस्तो पनि..
१० किलो सुनसहित काठमाडौंको बालाजुबाट एकजना पक्राउ
काठमाडौं, १७ मंसिर । रसुवाको केरुङ नाकाबाट भित्राइएको १० किलो सुन सहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गोप्य सुचनाका आधारमा काठमाडौंको बालाजुबाट शनिबार साँझ फूलसिंह तामाङलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकलको साइलेन्सरभित्र लुकाएर सुन..
उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामालाई निष्काशन गर्न सिफारिस
काठमाण्डौं, १७ मंसिर । उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामालाई निष्काशन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले सिफारिस गरेको छ । पार्टीको हित र लोकतन्त्रलाई आघात पुग्ने काम गरेको भन्दै राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति समशेरले लामालाई..